Imodi yendiza: ukuthi iyini, ngeyani nokuthi ungayivula kanjani nokuyivala - VidaBytes | I-LifeBytes
I-Encarni Arcoya | 30/05/2022 08:27 | Kubuyekezwe ku- 31/05/2022 08:34 | Isondlo
Njengomthetho ojwayelekile, sikhumbula imodi yendiza lapho sithatha indiza ngoba siyazi ukuthi, phakathi nendiza, kufanele sinqamule iselula noma siyibeke, njengoba besitshela ngohlelo lwezinkulumo zomphakathi, “imodi yendiza”.
Kodwa kuyini ngempela? Kwenzelweni? Ugqoka futhi ukhumule kanjani? Ingabe akhona amaqhinga ngokusetshenziswa kwawo? Uma nawe uzibuza, sizokuphendula konke.
1 Iyini imodi yendiza
2 Imodi yendiza isetshenziselwa ini?
2.1 ukulala kangcono
2.2 Gcina ibhethri
2.3 Bhala ku-WhatsApp ngaphandle kokubonwa
2.4 Qala kabusha ukuxhumana
3 Uyivula futhi uyivale kanjani imodi yendiza
3.1 Vula futhi uvale ku-Android
3.2 Vula futhi uvale ku-iPhone
3.3 Vula futhi uvale kukhompuyutha
Iyini imodi yendiza
Imodi yendiza empeleni isilungiselelo onaso kudivayisi yakho yeselula, nakuba futhi sikhona kumathebulethi, amakhompyutha aphathekayo, amakhompyutha... Inhloso yalokhu ukunqamula ukuxhumana okungenantambo, kungaba i-WiFi, idatha yefoni, ikholi noma isignali yomlayezo noma i-Bluetooth.
Lokhu kusho ukuthi ifoni ayisebenzi nhlobo, njengoba ungeke ukwazi ukushayela noma ukwamukela izingcingo, noma i-SMS kanye nezinhlelo zokusebenza ngeke zisebenze. Yilabo kuphela abangasebenzisi i-inthanethi abangasebenza, kodwa okusele kuzomiswa kuze kube yilapho le modi yenziwe kungasebenzi.
Isizathu esenza ukuthi ibizwe ngale ndlela ingoba yayibhekisela ekwenqabeni okwakukhona eminyakeni edlule lapho lapho uhamba ngendiza wawungakwazi ukusebenzisa iselula yakho nabakhiqizi, ngenhloso yokungacimi iselula , baklama lesi silungiselelo.
Nakuba namuhla kwaziwa ukuthi akwenzeki lutho ngokungayivuli ezindizeni, bayaqhubeka beyincoma, futhi bayayiphoqa. Kodwa-ke, kusukela ngo-2014 ingandiza ngaphandle kokuyenza isebenze (evunyelwe yi-EASA noma i-European Commission). Khumbula ukuthi, ngaphandle kwalokhu kungenzeka, yizinkampani zezindiza ezinezwi lokugcina kulokho okungenziwa nezingenzeki ezindizeni.
Imodi yendiza isetshenziselwa ini?
Impela uye wasebenzisa imodi yendiza ngesikhathi esithile, hhayi ngokunembile ukundiza. Futhi kungenxa yokuthi, nakuba ukusetshenziswa kwayo okuyinhloko kuyilokhu, empeleni kunokusetshenziswa okuningi nsuku zonke. Ezinye ezivame kakhulu yilezi ezilandelayo:
Sikhumbula ukuthi siya ngokuya sixhumeka kumadivayisi (iselula, ithebhulethi, ikhompuyutha), umzimba wethu usabela kunoma yimuphi umsindo ophuma kuwo,aze aphaphame nje phakathi kwamabili esazi nje ukuthi sekufikeni.
Futhi lokho kulimaza ubuthongo bethu.
Ngalokho, ukusebenzisa imodi yendiza kuyindlela yokumisa isikhashana iselula ngaphandle kokuyivala futhi ikuvumela ukuba ube namahora ambalwa okuthula nokuphumula umzimba wakho ozokubonga ngakho.
Okunye ukusetshenziswa okuvamile kwemodi yendiza ukonga ibhethri. Ukuba ne-inthanethi, i-bluetooth, nokuxhumana okuningi okuvulekile ngokuqhubekayo kwaziwa kuqeda ibhethri. Uma unokuncane kwesokunxele, ukuyivula kungakusiza ukuthi uyigcine, nakuba inenkinga nokuthi ungashiya ifoni ngaphandle kokuxhumana..
Okuthile okungaqinile kungaba ukususa idatha ne-WiFi ukuze ingaxhumeki.
Bhala ku-WhatsApp ngaphandle kokubonwa
Lokhu mhlawumbe kungenye esetshenziswa kakhulu abaningi, futhi Kuqukethe ukuvula imodi yendiza ukuze ukwazi ukubona izifunda noma ukuphendula imilayezo ngaphandle kokuthi "ukunyonyoba" kuvele. 'Ukubhala' uma siphendula.
Lokho kusho ukuthi ungathatha isikhathi sakho uphendula, noma uvele uzinike isikhathi kuhlelo lokusebenza ngaphandle kokuthola imilayezo.
Qala kabusha ukuxhumana
Kuwukusetshenziswa okuncane okwaziwayo, kodwa kusebenza kahle kakhulu lapho ukuxhumana nefoni yakho kunikeza izinkinga (awunayo isignali, iyanqamuka, awuzwa kahle, njll.). Uma lokho kwenzeka, ukuzeukuvula nokuvala imodi yendiza phakathi nemizuzu emihlanu kungasiza ukusetha kabusha bese uqala kabusha ukuxhumana.
Ezimweni eziningi, lokhu kusiza ukulungisa izinkinga.
Uyivula futhi uyivale kanjani imodi yendiza
Manje njengoba usuwazi okwengeziwe mayelana nemodi yendiza, sekuyisikhathi sokuthi wazi ukuthi ungayenza kanjani isebenze futhi yenze ingasebenzi kuselula yakho, kungaba i-Android noma i-iPhone.
Iqiniso liwukuthi kulula kakhulu njengoba imvamisa ikuzilawuli ezisheshayo zefoni. Kodwa uma ungakaze uyidinge ngaphambilini futhi ungazi ukuthi ikuphi, sikwenza kube lula kuwe.
Vula futhi uvale ku-Android
Siqala ngezingcingo ze-Android. Iqiniso liwukuthi kunezindlela ezimbalwa zokuyivula (ngakho-ke ukuyivala) ukuze ube nezinketho:
Ukusebenzisa inkinobho yokuvala. Kunamafoni okuthi uma ucindezela futhi ubambe inkinobho yamandla, akunike imenyu encane ngaphambi kokucisha ngokuphelele, elinye lamabhathini kube elebhanoyi. Leyo yimodi yendiza futhi ngokuchofoza ungayivula (futhi uyisebenzise ngokufanayo).
Kuzilungiselelo ze-Android. Uma ufaka ibhathini lezilungiselelo efonini yakho, ungase ube nenjini yokusesha, ozoyicinga uma ingaphumi. Kodwa ngokuvamile izovela: phezulu kwemenyu noma ku-WiFi namanethiwekhi eselula. Kufanele nje uyivule bese kuba yiso leso.
kubha yezaziso. Uma wehlisa ibha yesaziso (uthatha umunwe wakho usuka phezulu uye phansi) futhi lapho, kuzilawuli zokufinyelela okusheshayo, uzoba nenkinobho yesithonjana sendiza ukuze uyisebenzise (noma ukuyivala).
Vula futhi uvale ku-iPhone
Uma kwenzeka iselula yakho iyi-iPhone, kufanele wazi ukuthi cishe uzoyithola ifana ne-Android, okungukuthi:
Kumenyu yezilungiselelo zocingo lwakho, kungaba ekuqaleni noma ukubheka i-WiFi nokuxhumana.
Esikhungweni sokulawula se-iPhone yakho.
Vula futhi uvale kukhompuyutha
Ngaphambi kokuthi siphawule ukuthi maningi amalaptop namakhompyutha anenkinobho yemodi yendiza. Endabeni yekhompuyutha engumbhoshongo, ukusetshenziswa kuyivelakancane kakhulu, ngaphezu kokusetha kabusha ukuxhumana onakho, kodwa kuma-laptops kungasetshenziswa kakhulu, ikakhulukazi uma uhamba futhi usebenza nakho phakathi nohambo.
Ukuyivula nokuyivala kuzoncika ekutheni uyayisebenzisa yini iWindows, Linux noma Mac kukhompuyutha yakho, kodwa cishe kuzo zonke uzoyithola kalula ngokuyicinga enjinini yokusesha yemenyu enkulu noma ngokuthola isithonjana esinendiza (efana nalesi esikumakhalekhukhwini wakho).
Yebo, khumbula ukuyivala ngemuva kwalokho, ngaphandle kwalokho, kungakhathaliseki ukuthi uzama kangakanani ukuxhuma kunethiwekhi kamuva, ngeke ikuvumele.
Njengoba ubona, imodi yendiza, nakuba ekuqaleni yayiklanyelwe izindiza, namuhla isinokusetshenziswa okuningi okwengeziwe. Kufanele nje uyinike ithuba bese uzama. Akukho okwenzekayo isikhashana ngaphandle kweselula.
Indlela ephelele ye-athikili: LifeBytes » Isondlo » Imodi yendiza: ukuthi iyini, ingeyani nokuthi isetshenziswa kanjani nokuyivala